Magaaladda Muqdisho oo loo shiday Nalalkii wadooyinka
Loading...	Home Wararka Magaaladda Muqdisho oo loo shiday Nalalkii wadooyinka
Magaaladda Muqdisho oo loo shiday Nalalkii wadooyinka	Friday, 15 June 2012 12:33	Duqa Magaalada Muqdisho ahna Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa sheegay in bilicda Magaalada Muqdisho ay dib u soo laaban doonto, isagoo ka dhawaajiyay in magaalada ay gashay Iftiinkii Nabada.
Isagoo ka hadlayay xalay Munaasabad xariga looga jarayay Wadada Maka Al-Mukarama oo laga taagay Baalooyin Nalal ah oo ku shaqeynaya Iftiinka Qoraxda ayaa waxaa uu ugu mahadceliyay Dowladda Norway sida ay gacan uga geysatay in wadooyinka lagu xiro nalal.
"Muqdisho waxay la jaanqaadeysa Qarniga 21aad horumar kasta, waxaa bilowday iftiinki nabada, bilicdii waa soo noqoneysa, ma jiri doonto Nalal Koronto ama fiilo nooga baahan, Ileyska qoraxda ayaa magaalada noo sahlaya inay wada iftiimiso"ayuu yiri Gudoomiye Tarsan.
Waxaa uu sheegay in Muqdisho ay dib ugu soo laaban doonto bilicdeedi, isagoo soo dhoweeyay in xilli habeen ah ay dhalinyarada orodo ku soo bandhigaan wadooyinka, iyadoo uu Iftiin jiro.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa lagu ammaanay wax qabadkiisa dhinaca bilicda magaalada, iyadoo tan iyo markii uu xilka qabtay Tarsan wax badan laga ka qabtay nadaafada iyo bilicda magaalada.
Dhismayaashii taariikhiga ahaa sida Taalooyinka magaalada ayaa dib loo dayactiray, waxaana magaalada oo gashay jawi ka bedelan sidii hore ka socda dhismayaal badan, taasoo wax badan ka tari doonta in Muqdisho ay dib u dhisanto
KULAN LOOGU SOO HORJEEDO MASHINKA LAGA KEENAY XUKUUMADA OO MUQDISHO KU YEESHAY XILDHIBAANOMonday, 20 May 2013 XARAKADA AL-SHABAAB MAXEEY KA TIRI MADAXWEYNAYAASHA TIRADA BADAN EE JUBOOYINKA KU LOOLAMAYAMonday, 20 May 2013 OGAYSIIS KU SOCDA AQRISTAYAAHSA SHABAGADA WARBAAHINTA HOOSINGOW.COM OO HAWADA KU SOO LAABATAYMonday, 20 May 2013 MADAAFIIC HOOBIYE XALAY LAGU GARAACAY NAWAAXIGA MADAXTOOYADA SOMAALIYAMonday, 20 May 2013 MADAXWEYNAHA SOMAALIYA OO U AMBA BAXAY DALKA JABAANSunday, 19 May 2013 Main Menu